Maimbo ny atiny satria tsy ampy amin'ireo singa ireo | Martech Zone
Maimbo ny atiny satria tsy ampy amin'ireo singa ireo
Alarobia, Septambra 9, 2015 Alarobia, Septambra 9, 2015 Douglas Karr
Ny tatitra momba ny indostria aorian'ny tatitra dia manohy milaza fa ny fifandraisan-davitra sy ny maha-izy azy manokana dia lakilen'ny fampitomboana ny tahan'ny fiovam-po. Ka maninona ary ireo mpivarotra atiny no manohy manoratra drivel ankapobeny izay mitovy amin'ny anjaran'ny hafa rehetra? Omaly alina aho dia nanao fampisehoana tany amin'ny toerana iray Sparks hetsika ary nantsoiko hoe:
Mitsoka ny atiny. Tahaka ny itiavanao azy marina.
Ny tiako holazaina amin'ilay famelabelarana dia ny tsy fanevatevana ny fahafahan'ny olona manoratra atiny; izany dia ny fitsikerana ny fahafahan'izy ireo manao manoratra atiny ho an'ny mpihaino azy. Matetika isika hiverina amin'ny fanoratana atiny izay inoanay zava-dehibe, fa izany dia mampifandray afa-tsy amin'ny ampahany amin'ny mpihaino antsika amin'ny ankapobeny.
Ny olanay dia tsy mitovy ny mpihaino antsika. Prospect roa miaraka amin'ny demografika mitovy dia hanana dingana maro samihafa hampiroboroboana ny fifandraisana amin'ny orinasanao. Tsy miraharaha izany isika.
Singa 5 hanatsarana ny atiny
Ampitomboy ny fanekena - amin'ny fanampiana sary, audio, na horonan-tsary dia hampitombo ny fiatraikany sy ny fahalalana ny lahatsoratra soratanao.
Ataovy azo zaraina - manatsara ny atiny hananganana sanda mpamaky raha mizara izany dia paikady mahagaga. Ampio ireo mpamaky hampitombo ny tambajotran'izy ireo, hanampy ny mpamaky hampiroborobo ny mombamomba azy, hanampy ny mpamaky hiditra amin'ny fizarana atiny amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo, na hampahafantatra azy ireo ny antony iray hizaran'izy ireo satria miahy izy ireo.
Tapa-kevitra momba ny fanohanana - ny mpamaky sasany dia misy fiatraikany amin'ny fahatokisana, ny zava-misy, ny fahombiazana, ny fihetsem-po mitambatra ao. Ny atiny voalanjalanja izay misy ireo singa rehetra ireo dia hifandray amin'ny mpamaky bebe kokoa.
Hetsika mandresy lahatra - ampidiro ny atiny izay mitondra fandresen-dahatra - fampifandraisana, fifamaliana, fifanarahana, tsy fahampiana, tsy fitoviana ary fahefana.
Personalize - tsy manodina ny fiainany ny olona rehefa tonga na miala am-piasana. Ny fividianana orinasa dia mitaona ny namana, ny fianakaviana ary ny fivoarantsika manokana. Ny fividianana manokana dia misy fiantraikany amin'ny asanao. Ny fividianana fiara, ohatra, dia mety ho voataonan'ireo olana amin'ny kilometatra milevina mandritra ny dia lavitra.
Raha ny zava-misy dia nanao famerenana tamin'ny orinasa e-commerce izahay omaly. Manana fitazonana mpanjifa mahatalanjona sy tahan'ny fiovam-po avo lenta izy ireo, saingy rehefa nandeha ny fotoana dia sarotra ny nahazo mpanjifa vaovao. Rehefa niresaka tamin'izy ireo izahay, ny zavatra voalohany nolazain'izy ireo taminay dia ny maha-tokana ny fiarahan'izy ireo. Amerikanina 100% izy ireo. Ny ankamaroan'ny akora vokariny dia vita tamin'ny Amerikana (tsy azo raisina eto ny akora sasany). Namaly ny findainy isaky ny antso izy ireo. Ary manangana ny trano fitahirizan-dry zareo amin'ny herin'ny masoandro 100% izy ireo!
Tsapako fa toe-javatra tafahoatra ity, saingy ny zavatra rehetra nireharehany momba ny orinasan-dry zareo dia sarotra na saika tsy ho hita ao amin'ny tranonkalany! Ahoana raha nanova ny atiny tamin'ireto manaraka ireto izahay:
Ampio sary ny fotodrafitrasa hisy fiantraikany amin'ny mpitsidika raha vantany vao tonga eo amin'ilay toerana izy ireo.
Mizara ny vaovao amin'ny fahazoana fahaleovan-tena angovo. Ny andraikitra ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana dia antony iray hizaran'ny mpamaky maro.
Ampidiro ny zava-misy momba ny indostria, ny infografika, ny whitepapers, ny fijoroana vavolombelona ary ny fanadihadiana tranga hanohanana ireo mpitsidika fanapahan-kevitra.
Ny mpanjifa dia efa manana tolotra fandefasana entana sy fihenam-bidy voalohany. Angamba manampy ny daty lany daty mety handresy lahatra ilay olona amin'ny alàlan'ny fanolorana zara raha.
Mafana ireo olona ireo! Maninona raha ampidirina anaty horonan-tsary miavaka amin'ny tantaran'ny orinasa, ny serivisy ho an'ny mpanjifa mahatalanjona ary ny sasany amin'ireo mombamomba ireo mpiasa ireo? mampifandray manokana miaraka amin'ny mpijery dia hitondra fiovam-po.
Averina indray, izay inoanao fa manakiana ny vokatrao na ny serivisinao dia tsy voatery hoe izay inoan'ny mpanjifanao fa manakiana. Matetika ny masoivoho no mifantoka amin'ny fiovam-po. Saingy indraindray ny mpanjifa dia liana kokoa amin'ny kalitaon'ny atiny omenay. Izany no zavatra tokony hotadidintsika ao am-panoratana atiny izay mampiroborobo ny orinasanay!
Ahoana ny fomba hamoronana atiny azo zaraina